ချစ်သက်တမ်း ၄ နှစ်ပြည့်မှာ သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကြောင့် အရမ်းကို ပျော်ရွှင်နေခဲ့ရတဲ့ မိုးမိုး – XB Media Myanmar
သာယာ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ မိသားစုလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရှိခဲ့ရတဲ့ အဆိုတော် မိုးမိုး ကတော့ ယခုဆိုရင် ချစ်ဇနီးလေးနဲ့အတူ ချစ်သက် ၄ နှစ်ကြာသည့်တိုင်အောင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ချစ်သမီးလေးနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို တည်ဆောက်ထားနိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သာယာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အချစ်ရေး မိသားစုရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရှိခဲ့ရတဲ့ မိုးမိုးကတော့ ယခုဆိုရင် အပျော်ပေါ်အပျော်ဆင့်ခဲ့ရတာကြောင့် အရမ်းကို ပျော်ရွှင်မဆုံး ဖြစ်နေခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အပျော်ပေါ်အပျော်ဆင့်ပြီး အရမ်းကို ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ မိုးမိုးကတော့ ” လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်တုန်းက မောင်မိုးမိုး နဲ့ အခု မောင်မိုးမိုး ဘာကွာလဲ ? (ဝိတ်တက်လာတာ ထည့်မပြောကြေး) ကျွန်တော် မပြောတော့ဘူး ကျွန်တော့်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ် နဲ့ အခု ကွာခြားချက်ကို မြင်တဲ့သူတွေပဲ ပြောပြကြပါ (တကယ် ပြောပေးကြပါ ) အဲဒီကွာခြားချက်ကို လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ သူတွေကတော့ ထူး ပြောစရာမလိုတဲ့ ဒေါ်ဘုမ(24/7 ဗိုက်မှာ ဘုထွက်နေလို့ပါ ) မမဆိုဂျူးနဲ့ မိုဂျူးတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် Happy4th anniversary ပါ ချစ်ဆုံးလေး P ” ဆိုပြီး ရေးဖွဲ့ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားရှိခဲ့ရတဲ့ မိုးမိုးကတော့ သမီးလေးအပြင် နောက်ထပ် သားလေးတစ်ယောက်ကို ထပ်ပြီးပိုင်ဆိုင်ရတော့မှာ ဖြစ်တာကြောင့် ” ကိုယ်​ဝန်​ ၂လ​လောက်​ထဲက ​ညောင်​ပင်​က အိမ်​မက်​​ပေးတာ သား​ယောကျာင်္း​လေးဆိုပြီး သားသားဖြစ်​ဖို့ အဓိဌာန်​ဝင်​ ဆု​တောင်းခဲ့တာ ဒီဆု​ကြီးပြည့်​သွားပြီကွ 100% သားသား​လေးပါတဲ့ ” ဆိုပြီး အရမ်းလိုချင်တဲ့ သားလေးတစ်ယောက်ကို ထပ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရရှိတော့မှာကြောင့် အရမ်းကို ပျော်ရွှင်နေရကြောင်းကို သူ့ရဲ့ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ ရေးသားဖော်ပြပေးထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သားလေးကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရရှိတော့မှာမို့ အရမ်းကို ပျော်ရွှင်နေခဲ့ရတဲ့ ဖေကြီး မိုးမိုးကတော့ ” မိုဂျူးလေးပုံက တစ်ပုံပဲရှိသေးလို့ ဒါလေးပဲ ပြန်တင်လိုက်တယ် ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ ထပ်ပြီးရေးသားဖော်ပြ ပေးထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ရတဲ့ သမီးလေး တစ်ယောက်အပြင် အရမ်းလိုချင်နေတဲ့ သားလေးတစ်ယောက်ကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ရရှိတော့မှာကြောင့် အရမ်းကို ပျော်ရွှင်နေတဲ့ မိုးမိုးရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုလေးကို ကြည့်ပြီး ကြည်နူးမိတယ်ဆိုရင် ဒီပို့စ်လေးကို မျှဝေပြီး အားပေးသွားကြပါဦးနော် ပရိသတ်ကြီးရေ။ ကြည့်ရှုအားပေးကြပါသော ချစ်ပရိသတ်များအပေါင်းကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
သာယာ ပြျောရှငျစရာကောငျးလှနျးတဲ့ မိသားစုလေးကို ပိုငျဆိုငျထားရှိခဲ့ရတဲ့ အဆိုတျော မိုးမိုး ကတော့ ယခုဆိုရငျ ခဈြဇနီးလေးနဲ့အတူ ခဈြသကျ ၄ နှဈကွာသညျ့တိုငျအောငျ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ခဈြသမီးလေးနဲ့ ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို တညျဆောကျထားနိုငျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သာယာပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ အခဈြရေး မိသားစုရေးကို ပိုငျဆိုငျထားရှိခဲ့ရတဲ့ မိုးမိုးကတော့ ယခုဆိုရငျ အပြျောပျေါအပြျောဆငျ့ခဲ့ရတာကွောငျ့ အရမျးကို ပြျောရှငျမဆုံး ဖွဈနခေဲ့ရတာပဲဖွဈပါတယျ။
အပြျောပျေါအပြျောဆငျ့ပွီး အရမျးကို ပြျောရှငျခဲ့ရတဲ့ မိုးမိုးကတော့ ” လှနျခဲ့တဲ့ ၄ နှဈတုနျးက မောငျမိုးမိုး နဲ့ အခု မောငျမိုးမိုး ဘာကှာလဲ ? (ဝိတျတကျလာတာ ထညျ့မပွောကွေး) ကြှနျတျော မပွောတော့ဘူး ကြှနျတေျာ့ကို လှနျခဲ့တဲ့ ၄ နှဈ နဲ့ အခု ကှာခွားခကျြကို မွငျတဲ့သူတှပေဲ ပွောပွကွပါ (တကယျ ပွောပေးကွပါ ) အဲဒီကှာခွားခကျြကို လုပျဆောငျပေးတဲ့ သူတှကေတော့ ထူး ပွောစရာမလိုတဲ့ ဒျေါဘုမ(24/7 ဗိုကျမှာ ဘုထှကျနလေို့ပါ ) မမဆိုဂြူးနဲ့ မိုဂြူးတို့ပဲ ဖွဈပါတယျ Happy4th anniversary ပါ ခဈြဆုံးလေး P ” ဆိုပွီး ရေးဖှဲ့ထားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
အရမျးကို ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ သမီးလေးတဈယောကျကို ပိုငျဆိုငျထားရှိခဲ့ရတဲ့ မိုးမိုးကတော့ သမီးလေးအပွငျ နောကျထပျ သားလေးတဈယောကျကို ထပျပွီးပိုငျဆိုငျရတော့မှာ ဖွဈတာကွောငျ့ ” ကိုယျဝနျ ၂လလောကျထဲက ညောငျပငျက အိမျမကျပေးတာ သားယောကြာင်္းလေးဆိုပွီး သားသားဖွဈဖို့ အဓိဌာနျဝငျ ဆုတောငျးခဲ့တာ ဒီဆုကွီးပွညျ့သှားပွီကှ 100% သားသားလေးပါတဲ့ ” ဆိုပွီး အရမျးလိုခငျြတဲ့ သားလေးတဈယောကျကို ထပျပွီး ပိုငျဆိုငျခှငျ့ ရရှိတော့မှာကွောငျ့ အရမျးကို ပြျောရှငျနရေကွောငျးကို သူ့ရဲ့ဖဘေု့တျစာမကျြနှာကနေ ရေးသားဖျောပွပေးထားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
သားလေးကို ပိုငျဆိုငျခှငျ့ ရရှိတော့မှာမို့ အရမျးကို ပြျောရှငျနခေဲ့ရတဲ့ ဖကွေီး မိုးမိုးကတော့ ” မိုဂြူးလေးပုံက တဈပုံပဲရှိသေးလို့ ဒါလေးပဲ ပွနျတငျလိုကျတယျ ” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ဖဘေု့တျစာမကျြနှာကနေ ထပျပွီးရေးသားဖျောပွ ပေးထားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ခဈြရတဲ့ သမီးလေး တဈယောကျအပွငျ အရမျးလိုခငျြနတေဲ့ သားလေးတဈယောကျကိုပါ ပိုငျဆိုငျရရှိတော့မှာကွောငျ့ အရမျးကို ပြျောရှငျနတေဲ့ မိုးမိုးရဲ့ ပြျောရှငျမှုလေးကို ကွညျ့ပွီး ကွညျနူးမိတယျဆိုရငျ ဒီပို့ဈလေးကို မြှဝပွေီး အားပေးသှားကွပါဦးနျော ပရိသတျကွီးရေ။ ကွညျ့ရှုအားပေးကွပါသော ခဈြပရိသတျမြားအပေါငျးကို ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျ။
တစ်နိုင်ငံလုံးရှေ့မှာ စိုင်းစိုင်းရဲ့ ဆေးအကြီးစားထိုးတာကို ခံလိုက်ရတဲ့ ဆန်းထွဋ်